Maraykanka: khuburada Sayniska, Xeel-dheerayaasha xannuunada Faafa Iyo Saraakiisha Caafimaadka Oo isku Murgay - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Magazine / Qubanaha / Warar | By admin
Dhimashadii Ugu Badnayd Maraykanka Ee COVID-19, Waxay Dhalisay Doodo Iyo Sawaxan
Washington(ANN)-Doodo kulal ayaa ka dhasahay kadib markii dalka Maraykanku noqday kii ugu dhimashada badnaa ee caabuqa Coronavirus ee dunida ku baahay, iyadoo tiradii ugu badnayd maalin keliya ugu dhimatay dalkaa.
Maraykanka ayaa diiwaangeliyay in ka badan 20,000 oo kiis COVID-19, ah tan iyo markii uu cudurka dilaaga coronavirus uu ka bilowday, taasoo ka saraysa tirada dalka Talyaaniga oo ah dalka ugu badan ee tirada dhimashada la xaqiijiyay.
Marka loo eego warbixinta tirada dhimasada ee ay soo gudbisay jaamacadda Johns Hopkins University, illaa iyo hadda 20,463 qof ayaa ku dhintay guud ahaan Maraykanka marka la barbar dhigo 19,468 oo caabuqa Coronavirus ugu dhintay dalka Talyaaniga.
Jaamacadda Johns Hopkins, ayaa sidoo kale sheegtay in dalka Maraykanka 526,396, qof la xaqiijiyay kiisaska caabuqa, kuwaas oo ka dhigaya tiradii ugu badnayd ee dal keliya lagu arko intii caabuqa COVID-19, ka dilaacay aduunka, halka Spain iyo Italy ay galeen kaalinta labaad iyo saddexaad oo kala ah 163,027 iyo 152,271-kiis siday u kala horreeyaan.
Arrintan ayaa si weyn u abuurtay doodo gudaha Maraykanka, kadib markii Jimcihii oo keliya ay dhinteen in kabadan 2,000 oo Maraykan ah, taas oo dhalisay doodo u dhexeeya masuuliyiinta Maraykanka, Khuburada dhanka Sayniska, aqoonyahanka dalkaa, khabiirada ku takhasusay cudurrada faafa, dhakhaatiirta Caafimaadka, Siyaasiyiinta iyo dadka caadiga ah.
Qaar ka mid ah khuburada iyo xeel-dheerayaasha Maraykanka ee xannuunada faafa, ayaa ku doodaya qaarkood in dadka dhimanaya aal dhamaantood lagu dari karin dhimashada Coronavirus, iyagoo ku doodaya in dadka qaba cudurrada neefsashada ay u dhinteen iyaga oo aan la tirin, isla markaana aannay jirin tirakoob dhab ah oo xaqiijinaya sababaha rasmiga ah ee dhimashada, marka laga yimaado xaaladdan Fayriska COVID-19.
Waxayna sheegayaan inay sidoo kale jiraan dad si caadi ah u dhintay iyo kuwo xanuunno kale u dhintay, kuwaas oo dhammaantood lagu daro liiska dhimashada Coronavirus. dhakhaatiirta cudurrada faafa, ayaa ku doodaya in loo baahanyahay baadhitaan dhab ah iyo in la helo sababta dhimashada iyo inay jiraan xanuunno kale.
Sidoo kale, Saynisyahano Maraykan ah oo daraasaad ku sameeyay tirakoobka dhimashada ee ay sababaan hargabka iyo cudurada kale ee neefsashada, ayaa sheegaya inay goor hore tahay in la qiyaaso inta dhimasho ee aan la ogaan, waxayse ku doodeen in cudurka leh calaamadaha caanka ah sida Coronavirus, dhimashada natiijooyinka togan waxay xaqiiqdii matalaan kaliya in yar oo ka mid ah wadarta cudurku keenay.
Aqalka Cad, ayaa Arbacadii sheegay inuu ku qiyaasay in 100,000 ilaa 240,000 oo Maraykan ah ay u dhimanayaan oo uu dilayo COVID-19, taas oo aad uga badan 60,000 ciidamada Maraykanka ah oo lagu dilay Dagaalkii Vietnam. Saynisyahannada ayaa sheegay in aannay garanayn sida Aqalka Cad uu mala-awaalkaa u sheegay, ama usoo saaray soo-jeedinteeda, iyadoo aannu raacin oo ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo.
Hoggaamiyaaysha Maraykanka, qaarkood , ayaa sheegay in tirada dhimashada ay noqotay bartilmaameed si weyn loo siyaasadeeyay, halka difaacayaasha Trump ay leeyihiin tirada rasmiga ah waa la marin-habaabiyay, taas oo ay sabab uga dhigayaan inay dhammaan dadka dhintay aannay ahayn kuwo baadhitaan lagu sameeyay, si loo xaqiijiyo inay u dhinteen Coronavirus, xitaa haddii ay jirto sabab kale oo dhimasho, sida wadna xanuun ama shil kale.
Marc Lipsitch, oo macalin jaamacadeed oo ku takhasusay cudurrada faafa ee Jaamacadda Harvard, ayaa sheegay inay u badan tahay inay dadka qaar u dhimanayaan si la mid ah astaamaha COVID-19, kuwaas oo aan u dhimanin covid-19. Faafinta noocan ah waa dhibaato sabab kasta oo dhimasho ah, ayuu yidhi, laakiin waa arin yar oo “lagu nafaqeeyo dhibaatada ka soo horjeedda: dhimashada waxaa sababa xaaladdo wada jir ah, laakiin aan waligeed loo saarin, sidaa daraadeed tirada dhimashada lama saadaalin karo.” ayuu yidhi.
Dooda baadhitaanka qofka dhinta si loo oggaado inay xaaladdo kale jiraan, ama xanuunno kale, waxa ka jawaabaya Marc-Alain Widdowson, oo ah khabiir ku takhasusay cudurrada Faafa oo horre uga tirsanaa, xarunta Maraykanka ee CDC-da, isla markaana hadda ah agaasimaha Machadka Daawada (Dusha Antwerp ee Belgium) isagoo yidhi. Marna ma awooddaysid mana doonaysid inaad tijaabada ka qaadatid qof walba oo bukaan ah iyo qof kasta oo dhinta. Marka shaki la’aan – waa xaqiiqo – tirada dhimashadu waa mid aan lagaranaynin caalamka maxaa yeelay ma adeegsanaysid baadhitaankii aad ku oggaan lahayd.”
Sidoo kale, Clay Marsh, oo ka tirsan kooxda la dagaalanka Fayriska Coronavirus ee West Virginia, ayaa qirtay in tirinta gobolka ay u muuqato mid aan dhameystirnayn. West Virginia ayaa ahayd gobolkii ugu dambeeyay ee gobolada Maraykanka laga soo sheego kiiska fayriska waxaana la diiwaangeliyay laba qof oo dhimasho ah keliya illaa Sabtidii.
waxaan u malaynaynaa in aan hoos u dhigayno tirada dhimashada, ayay tidhi, Marsh, oo ah ku xigeenka iyo madaxa fulinta ee culuunta caafimaadka ee jaamacadda West Virginia. Tirakoobka ayaa sidoo kale hooseeya West Virginia, Marsh ayaa yidhi, sababta oo ah gobolka ayaa leh dad yar, oo reer Miyi ah, isla markaana horre u lahaa Iskuulo iyo ganacsiyo aan muhiim ahayn goor hore.
Arrintan, ayaa sababtay in xarunta Daraaraadka cudurrada Faafa u qaabilsan Maraykanka ee loo soo gaabiyo, CDC ay bilowday dadaalo ay ku adeegsanayso xogta qaran ee ku saabsan cudurrada, cusbitaalada si loo hubiyo shahaadooyinka dhimashada, isla markaana loo helo qiyaas dhab ah oo loo raaco caabuqa COVID-19 iyo xidhiidhka ka dhexeeya cudurrada kale si loo helo dhimashada saxda ah ee Fayriska, halkaas oo kiisaska sheybaadhka lagu xaqiijiyey iyo dhimashada ay si isku mid ah u yihiin tiro yar oo ka mid ah wadajirka cudurka.
Waxaan u badan nahay inaan helno macluumaad dheeri ah oo ku saabsan covid-19, maxaa yeelay waxaa jira wacyigelin ballaadhan oo bulshada ku saabsan waxa ay tahay, ayuu yidhi Nordlund.
Tirakoobka dhimashada rasmiga ah ee CDC, oo ku saleysan warbixinnada ay soo gudbiyeen dowladdu, ayaa dhaafiweyday 6,593 illaa Sabtidii. Sababta oo ah maqnaanshaha warbixinta awgeed, tiradu si aad ah ayey uga yar tahay tirooyinka sida joogtada ah loogu cusbooneysiinayo hay’addaha warbaahinta iyo baadhayaasha jaamacaddaha. Tirada dhimashada Washington Post ayaa kor u dhaaftay 8,000 Sabtidii, marka loo eego tirada ay Hay’adda CDC, soo saartay.
Tirakoobka dhimashada ee dowladda federaalka ayaa maalin walba adduunka laga baahiyaa iyada oo tilmaam u ah sida dhakhsaha leh ee uu fayrasku u fidayo iyo sida ay ummaddu u halgameyso. Waxay leedahay saameyn muuqata oo siyaasadeed oo ku wajahan Madaxweyne Trump, oo qiimeyntooda ansixinta ay sare u kacday dabayaaqadii bishii Maarso inkasta oo uu hoos u dhigay khataraha viruska usbuucyada.
Dunida oo dhan, saraakiisha dawladdu waxay isweydiinayaan in tirada dhimashada ee rasmiga ah ee loo nisbeeyay fayriska oo ay sheegayaan in ay si hoose aad u yar tahay.
Tusaale, ahaan Waqooyiga Talyaaniga, magaalada Nembro waxay diiwaan gelisay 31 qof oo fayriska ah laga soo bilaabo Jan ilaa March 2020. Laakiin Duqa magaalada Claudio Cancelli ayaa dhawaan sheegay in wadarta tirada dadka dhintay wakhtigaas – 158 – ay afar jibaar ka badan tahay celceliska waqtigaas ee isla sanadkaas.
Dhinaca kale Tirada dhimashada ee Faransiiska ayaa loo aanaynayaa fayriska oo sii kordhay toddobaadkii la soo dhaafay ka dib markii masuuliyiintu bilaabeen baadhitaan, taas oo ay ku jiraan kuwii hore aan loo soo sheegin ee lagu hayo guryaha dadka lagu xanaanneeyo, waxayna kor u qaadaysa tirada in kabadan 2,000.
Goob-joogayaasha gudaha iyo dibadda ee Shiinaha, oo ah halka uu fayrisku markii ugu horreeyay kasoo bilaabmay dhammaadkii sanadkii horre 2019, ayaa ku eedeeyay xisbiga shuuciga ah ee haya talada in ay soo tebiyeen cudurro aan caadi ahayn iyo heerka dhimashada. Warbaahinta, oo ay kujiraan kuwa Maraykanka, ayaa ku waramay in tirinta gubida dadka u dhintay COVID-19, ay amar ku siisay Wuhan, oo ku taal badhtamaha gobolka Hubei ee Shiinaha, waxayna arrintan muujinaysaa in dad aad u badan ay u dhinteen caabuqa COVID-19 marka loo eego tirada rasmiga ah ee dhimashada ee Shiinaha oo ah ilaa 2,500.
Madaxweyne Trump ayaa Arbacadii sheegay in “tirooyinka Shiinaha ay u muuqdaan kuwo xooggaa dhinac yar marka la eeggo dhinaca iftiinka ah, waan fiicanahay haddan sidaa idhaahdo, ayuu yidhi, laakin Saraakiisha Shiinaha ayaa beeniyay eedeymaha, iyagoo sheegay in saraakiisha Maraykanka ay isku dayayeen in ay difaacaan mas’uuliyadda tirinta dadka Maraykanka ee u dhimanaya caabuqa Coronavirus.
Runtii waligeen run ma ahaan doonno, kuwo haya lambarro run ah, ”ayuu Wakefield yidhi. oo ah khabiir cudurrada faafa ah, waan ku dhownahay, laakiin waligeen ma hayno tirada dhabta ah ee sida saxda ah ugu dhimatay Coronavirus ”
khubarada, ayaa sheegaya qaarkood in Baadhayaasha caafimaadka iyo bixiyayaasha daryeelka caafimaadka ay khasab tahay in ay “adeegsadaan go’aankooda” si ay u go’aamiyaan haddii baadhitaanka noocan ah uu ku habboon yahay, sida ku xusan tilmaamaha xarunta, CDC.
Khubarada cilmu-nafsiga ayaa sheegaya in bukaannada u baahan daaweyn caafimaad loogu talagalay xaaladdo aan ahayn covid-19, sidoo kale laga yaabo inay ku xanuunsadaan oo ay ku dhintaan meelaha nidaamka daryeelka caafimaadka ay la kulmaan fayriska marka la geeyo goobaha caafimaadka.
Allison wuxuu sheegay in go’aanka ku saabsan in dib-u-baadhista maxaabiista ka dib la sii daayo maxaabiista ku dhimatay tuhun laga shakisan yahay Coronavirus, in lala samayn doono saraakiisha caafimaadka si xaalad-xaalad ah, iyada oo kuxidhan jiritaanka baadhitaannada iyo qodobo kale.